Tenri Ramen Restaurant (Baho Street) | မြန်မာ စားသောက်ဆိုင် လမျးညှနျ Myanmar Restaurant Guide Drecome Eat and Health
Tenri Ramen Restaurant (Baho Street) | Hlaing
Tenri Ramen Restauarant (Baho Street) ကို လွန်ခဲ့သောနှစ် ၂၀ခန့်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ပင်ရင်းဆိုင်မှာ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိပြီး အခြားဆိုင်ခွဲမှာ ကန်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိပါတယ်။ အေးဆေး ဆိတ်ငြိမ်သောနေရာတွင်တည်ရှိပြီး ဆိုင်ကိုရိုးရှင်းစွာပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ဂျပန်အစားအစာတစ်မျိုးတည်းကိုသာ အဓိကစုံစုံလင်လင်ရောင်းချပြီး ဂျပန်အရက်နှင့် အအေးအမျိုးမျိုးကိုလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Lunch Box Delivery Service ပေးပြီး မြို့နယ်အလိုက် Delivery Charges ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းမှာသင့်တင့်မျှတပြီး ဂျပန်အစားအစာကြိူက်နှစ်သက်သူများအတွက် သဘောကျနှစ်သက်စေမယ့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့အရောင်းရဆုံးနှင့် လူကြိုက်အများဆုံးအစားအစာများမှာ Stamina Ramen နှင့် Salmon Teriyaki Bento တို့ဖြစ်ပါတယ်။
No. 24, Baho Road, Ahlone Tsp., Yangon.
အနီးအနား Hal Pin မှတ်တိုင်7မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်